आईपीओशेयर बजारमध्य भोटेकोशीबुद्धभुमि नेपाललाभांश घोषणान्यादी हाइड्रोपावर
सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन ।
हो, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भनिएको छ । आउनुहोस्, आज हामी तपाईंलाई ५ त्यस्ता रूख र बोटहरू बताउँदैछौं जसले तपाईंको घरमा पैसाको ओईरो लाग्नेछ ।
मनी प्लान्टका बोटहरू लामो समयदेखि सबैका लागि मनपर्दो बोटका रूपमा देखिएका छन् । यसको दाखको बोट पनि धेरै सुन्दर देखिन्छ । साथसाथै यसले वातावरणलाई शुद्ध पार्ने पनि काम गर्दछ । मनी प्लान्टलाई इग्निस कोणमा राख्न उपयुक्त ठानिन्छ ।
यस दिशामा राख्दा यो राम्रो फल्छ र फुल्छ पनि । घरमा मनी पलान्टका बिरूवाहरू राख्ने गर्नाले तपाईंको घरमा पैसाको कहिल्लै पनि कमी हुँदैन । तपाईको कुनै पनि कार्य पैसाको अभावका कारण रोक्ने अवस्था आउँदैन ।
शमी रूख वस्तुको हिसाबले धेरै विशेष मानिन्छ । शमी रूख शंकरजीको सबैभन्दा प्रिय मानिन्छ । यस्तो विश्वास गरिन्छ कि घरमा शमी रूख रोप्नाले सम्पूर्ण गरिबी हटेर जान्छ ।
यो विश्वास गरिन्छ कि प्रत्येक सोमबार शिवलाई शमीको फूल र पातहरू चढाउँदा तपाईंको घरमा खुशी र समृद्धि आउँछ । तपाईं यसलाई पैंसाको रूख पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले तपाईंको घरमा पैसाको बहार ल्याएर गरिबी हटाउँछ ।
वास्तवमा अश्वगन्धा बोटलाई एकदमै धनी मानिन्छ। घरमा अश्वगन्धाको रूख रोप्नाले सुख र समृद्धि आउँछ । यो औषधीको रूपमा पनि उपयोगी छ र यसका धेरै अन्य फाइदाहरू रहेका छन् । अश्वगन्धाका फूलहरूलाई पनि भगवानको पूजामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
श्वेटार्क दुधको बोट हो र यसलाई राम्रो भाग्यको सूचक पनि मानिन्छ । ख्याल गर्नुहोला कुनै सेतो पदार्थ निस्कने बिरुवा घरमा राख्नु हुँदैन । श्वेटार्क भनिने यो बोटलाई गणेशको प्रतीक मानिन्छ । यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस् ।
यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ । विषेश खोजका साथ जो कोही मानिसलाई उपयोगी यो सामाग्री तयार पारेका छौ । आशा छ । तपाई आफुले पढिसकेपछि अरुका लागि सेयर गरिदिनुहुनेछ ।
भारी संख्यामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले माग्यो कर्मचारी
भ्यालेन्टाइनडेमा श्रीमतीलाई आफ्नो मृ’गौ’ला उपहार दिने श्रीमान विनोद
बलिउड चर्चित कमेडियन भारती सिंह र उनका श्रीमान प’क्रा’उ
विवाहित महिलाले कहिल्यै लगाउनुहुँदैन यी चिज, बेवास्ता गरे श्रीमानलाई हुन्छ यस्तो खतरा
तीन दिनमै झन्डै २०० अंकको बढोत्तरी, सेयर बजारमा चमक
१० प्रतिशतले छ कम्पनीको शेयरमूल्य वृद्धि, कुनको शेयरमुल्य कति पुग्यो ?
६ हजार ६ सय करोडको आइपीओ निष्काशन गर्दै, सर्वसाधारणलाई १० % मात्र
यूएईमा ३७१ नेपाली पुरुष महिला कामदारको माग
गैरकानूनी हैसियतमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई कतार सरकारले आममाफी दिने
ओमानमा नेपाली महिला कामदारको माग, तलब कति ?
नेपाल बैंकको लाभांश घोषणा
आज न्यादी हाइड्रोपावरको आईपिओ बाँडफाँड – यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट
आजदेखि सामलिङ्गको आईपीओमा आवेदन दिन सकिने